Zithini iiseva zensimbi ezingenanto? Iindidi kunye nokusetyenziswa. | Izidalwa ezikwi-Intanethi
pochoky | | Uyilo lwewebhu
Uvile ngokuqinisekileyo malunga neprojekthi ye-European GAIA-X. Kwaye, kwilizwe elinobutshaba, apho kugcinwa khona idatha kunye nembeko yomthetho wokukhuselwa kwedatha waseYurophu kubalulekile.
Kwakhona, oko sikubiza ngokuba lilifu asiyonto ingaphathekiyo, yinto ebonakalayo, kwaye ifunyanwa kumaziko amakhulu edatha. Ke ngoko, ukuba ungomnye wabo bayikhathalele imiba yabucala kwaye ihleli phi yonke idatha yakho buqu okanye ishishini, kuya kufuneka ubeke iliso kumboneleli ngenkonzo omkhethileyo ...
1 Yintoni umncedisi ongenanto?
2 Uyikhetha njani iseva ezinikeleyo?
3 Iimpawu kunye nokuSebenzisa
Yintoni umncedisi ongenanto?
Los iiseva ezingenantot abancedisi abazinikeleyoLuhlobo lwenkonzo ekubonelela ngezixhobo ezizinikeleyo, endaweni yokusebenzisa iiseva ezabelwana ngazo kubathengi abaliqela kunye namaqhekeza usebenzisa iVPS (i-Virtual Private Server). Ke ngoko, inezibonelelo ezithile, ezinje:
Ixabiso eliphantsi kwisiphelo esiphakamileyo (isiphelo esiphezulu) xa kuthelekiswa neVPS, ukugcina imali.
Ukusebenza ngokungabinazo izendlalelo zehypervisor okanye ukwabelana ngezixhobo zekhompyuter, kwabo bafuna ukudityaniswa.
I-bandwidth ephezulu ezinikeleyo, ke kulungile kwabo bathengi abafuna ukugcwala ngakumbi.
Ikhutshwe kwiindawo ezimbini zangaphambili uya kuba ne-TTFB ekhawulezayo (Ixesha lokuQala nge-Byte).
Ukuguquguquka okungcono kunye nokuzimela, unolawulo olupheleleyo.
Ukuqina okukhulu kunye nozinzo xa unikezelwa. Oko kukuthi, kusebenza ngokungathi unendawo yakho yedatha, kodwa ngaphandle kweendleko ezinkulu zokuba uthenge izixhobo kwaye uzigcine.
Ukubakho kokufumana izixhobo ngokulula ngokwandisa inkonzo yakho.
Ke ngoko, umncedisi ozinikeleyo ulungele ngokukodwa abo bafuna ukusingathwa okanye olunye uhlobo lwenkonzo yefu kwaye baceba ukuba nayo inani elikhulu lokufikelela. Oko kukuthi, ezo iVPS ingonelanga, ezinje ngeewebhusayithi ezithile zeenkampani ezinkulu, i-e-commerce, iibhloko kunye notyelelo oluninzi, njl.
Uyikhetha njani iseva ezinikeleyo?
Ukuze ukwazi khetha iseva efanelekileyo ezinikezelweyo, Kuya kufuneka ugcine engqondweni ezinye zeengongoma eziphambili:
ICPU-Ezi seva zineprosesa ezininzi. Baza kuba noxanduva lokuqhubekeka kwedatha, ke, kuya kufuneka ukhethe umatshini osebenza ngokufanelekileyo ngokwenjongo yakho.
i-ramKubalulekile ukuba ube nenani elifanelekileyo lememori ephambili, kuba ubuchule benkqubo buya kuxhomekeka kuyo. Kwakhona, kufanele ukuba neyona latency iphantsi.
Ukugcina: Ungasifumana isisombululo esinezixhobo eziqhelekileyo zemagnethi (HDD), okanye izisombululo ezikhawulezileyo zedrive hard drive (SSD). Ukongeza kuhlobo lwetekhnoloji, kubalulekile ukuba ukhethe isikhundla esifanelekileyo kwiinjongo zakho. Ewe, kwezi ndidi zezisombululo awunakukhathazeka malunga nedatha yakho, kuba zihlala zineenkqubo ezingafunekiyo (i-RAID), ke nokuba idiski yediski ayiphumeleli, inokutshintshwa ngaphandle kokuchaphazela idatha yakho.
Inkqubo yokusebenza: Elinye inqaku eliphambili, kwaye nangona uninzi lwezisombululo zikhetha iinkqubo zokusebenza ze-GNU / Linux, ezinikezela ngokhuseleko olukhulu, ukomelela kunye nozinzo. Abanye banokukhetha ukusebenzisa iWindows Server, kwimeko apho ufuna inkqubo ethile ngesizathu esithile.
I-Ancho de banda: enye into ebaluleke kakhulu, kuba imida yokuhanjiswa kwedatha iya kuxhomekeka kuyo. Kuya kufuneka ukhethe isisombululo esifanelekileyo esifanelekileyo kwiivolumu olindele ukuba zisuswe.
GDPRNjengoko benditshilo ekuqaleni, ukukhetha iserver ezinikeleyo kuhlala kuyinto elungileyo yokuqinisekisa ukuba iyawuhlonipha umthetho waseYurophu wokukhusela idatha.
abanyeUnomdla wokuhlalutya uhlobo lwepaneli yolawulo enikezelweyo, iinkonzo ezongezelelweyo ezinikezelwa ngumboneleli, njl.
Ukuba awukacaci malunga nokusetyenziswa okunokunikwa kwiserver ezinikeleyo njenge-OVHcloud, kuya kufuneka uyazi iinkonzo kunye nokusetyenziswa okunokwenzeka:
phakama: Yeyona nkonzo ifikelelekayo, kwiimfuno zokubamba okanye ukusingathwa kwewebhu, ukuhanjiswa, iiseva zefayile, okanye usetyenziso lwentengiso. Ngobubanzi bebhendi ephezulu, amandla aphezulu, kunye neeprosesa ze-Intel Xeon.
phambili: Inkonzo eyilelwe ngokukodwa iinkampani ezincinci ezifuna ukutyala imali kwiiseva ezininzi, ngokusebenza okuphezulu, isixa esikhulu se-RAM, kunye nobubanzi bebhendi engenamda. Umzekelo, kwabo bafuna ukubamba iiwebhusayithi ezihlanganisiweyo, iivenkile ze-e-commerce, ii -apps zeshishini (i-ERP kunye neCRM), ubuchule, njl.
yoGcino: iiseva ezinikezelweyo zokugcina yonke into oyifunayo, yenza iikopi zokulondoloza, okanye ukuhambisa ukusingathwa. Ngomthamo omkhulu (ukuya kuthi ga kwi-504TB), ukubanakho ukukhetha phakathi kwe-NVMe SSDs, ukubakho okuphezulu kuhlala unedatha yakho, kunye nokusebenzisana okuphezulu.
umdlalo: Ngolu hlobo lweseva ezinikeleyo evela kwi-OVHcloud unokuba neyakho ividiyo yomdlalo wevidiyo, ukhuselwe kuhlaselo lwe-DDoS kunye neeprosesa ezinamandla ze-AMD Zen 2. Umzekelo, unokuphumeza iserver yeMinecraft, okanye njengombambisi kumaqonga okusasaza.
IziboneleloUluhlu lweeseva ezinikezelweyo kunye neeprosesa ezinamandla zokwakha iziseko zophuhliso lweenkampani zetekhnoloji, amaziko ophando, okanye iiyunivesithi apho amandla ekhompyuter, ukugcina kunye nokusebenza kwenethiwekhi.
Uluhlu oluphakamileyoOlona manyano lusisiseko lwazo zonke iinkonzo, ezilungiselelwe ngokukodwa izinto ezifuna ukusetyenziswa ngamandla okanye iimeko ezibaluleke kakhulu. Umzekelo, izicelo ezifuna izixhobo ezinje ngeDatha eNkulu, ukuFunda ngomatshini, njl.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Uyilo lwewebhu » Zithini iiseva zensimbi ezingenanto?